ओलीले देउवासँग मिलेर एमसीसी पारित गराउने, ह्विप लगाउने जिम्मा नेम्वाङलाई ! – Himshikharnews.com
ओलीले देउवासँग मिलेर एमसीसी पारित गराउने, ह्विप लगाउने जिम्मा नेम्वाङलाई !
८ असार २०७७, सोमबार २३:३०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी संसदबाट पारित गराउने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन् । सरकारले एमसीसी पारित गराउनको लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराईसकेको छ । तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक विवाद चुलिएपछि अहिले संसदमै उक्त विद्येयक थन्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक संसदको रोष्ट्रममा उभिएर एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाईसकेका छन् । तर, पार्टीभित्रबाट उनलाई परिमार्जन नगरी एमसीसी अघि नबढाउन दबाब छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताद्धय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन नै बुझाईसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र एमसीसीबारे सहमति कायम गर्नको लागि अझै एक दुई दिन प्रयास गर्ने तर सहमति नभए अब यसलाई यत्तिकै संसदमा अड्काएर नराख्ने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ । उनले पार्टीमा यसबारेमा आफूले ह्विप जारी नगर्ने पनि मनशाय बनाएका छन् । बरु, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ह्विप लगाउनेबारे जिम्मा दिने उनको रणनीति छ । कांग्रेससँग मिलेर भएपनि एमसीसी पारित गराउने उनको योजना छ ।-reportersnepal.com bata